Cristiano Ronaldo Oo Ku Fikiraya Inuu Ka Tago Manchester United Xagaagan.
HomeSuuqa kala iibsigaCristiano Ronaldo oo ku fikiraya inuu ka tago Manchester United xagaagan.
May 5, 2022 Suuqa kala iibsiga, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Weeraryahanka Manchester United Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu ka fiirsanayo inuu ka tago kooxda heysata 20-ka jeer Horyaalka Ingariiska inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
37-sano jirkaan ayaa ku soo laabtay Old Trafford bishii Ogosto ee lasoo dhaafay, waxaana uu ku riyaaqay olole cajiib ah oo uu ku qaatay Red Devils, isagoo shabaqa soo taabtay 24 jeer 37 kulan oo uu saftay, waxaana u sii dheer inuu gacan ka geystay saddex caawin.
Horyaalka Premier League, waxa uu shabaqa soo taabtay 18 jeer, waxaana uu caawiyay seddex gool 29 kulan oo uu saftay, laakiin olole niyad jab leh oo Man United ah ayaa ka dhigay inay ku jiraan kaalinta lixaad ee kala sarreynta horyaalka , waxaana ay wajahayaan suurtogalnimada inay ciyaaraan kubbadda cagta Europa League xilli ciyaareedka soo socda.
Ronaldo ayaa weli sanad kale uga harsan tahay inuu qandaraaskiisa ku sii jiro, iyadoo dookh u ah 12 bilood oo kale, laakiin sida laga soo xigtay The Sun , Man United ayaa wajaheysa dagaal ay ku sii heyso xiddiga heerka caalami ee dalka Portugal.
Warbixinta ayaa sheegeysa in weeraryahanka qibrada leh uu aad u doonayo inuu mar kale ka ciyaaro kubada cagta Champions League xilli ciyaareedka soo socda, taasoo u horseedi karta inuu ka dhaqaaqo suuqa soo socda.